श्रीमान् , चित्तमा लागेको पित्त यसरी निकाल्न सकिन्छ ! « Gajureal
श्रीमान् , चित्तमा लागेको पित्त यसरी निकाल्न सकिन्छ !
प्रकाशित मिति: ९ श्रावण २०७७, शुक्रबार ०९:०१
पत्नी हत्या अभियोगमा सर्वस्व सहित जेल परेका पुर्व डिआईजी रन्जन कोइराला जेल गएका मान्छे फुत्त बाहिर निस्किए । यो घटना सुन्दा मान्छेमात्र होईन, छक्क भन्ने शब्द पनि तिनछक्क परेको छ ।
पावरफुल पदको जागिर थियो । फुल पावर बल थियो। हराभरा बुद्धि र धनपनि थियो । तर विवेक र मनलाई संयमित बनाउन नसक्दा अपराधको नालीमा परे। उठ्नै नसक्ने गरि झरे । नौली जोड्ने र पुरानी छोड्ने इच्छाले हुनसक्छ, मोह, घृणा र अहंकारले एउटीको हत्या गर्यो, अर्कीको जालमा पर्यो । अन्तत: आफ्नै भाग्य खोस्यो !
भनिन्थ्यो, पाप धुरीबाट कराउँछ, भाग्य सधैँका लागि हराउन सक्छ ! तर रंजनको केशमा उल्टो भयो। अर्थात्, यिनको त धुरीबाटै भाग्य फल्यो !
भाग्य फलाईदिने विधाता होई बोक्सिन्छ – कोमल चित्तका धनी, करुणाभावले ओतप्रोत मुख्य न्यायदाता चोलेस्वर बाबा र अति तेज युक्त केसी । उहाँहरुको चित्ता भन्छ- अभियुक्त र उनका सन्ततीलाई ठुलै अन्याय भएको छ ! यसको मतलब हो, यो केशलाई फेस गर्ने पुर्व न्यायाधिशहरु चाहिं करुणा विहिन, ढुङ्गे चित्त भएका मान्छे हुन् ? !
आवेग, क्रोध र बदलाभावले हुने यस्ता अपराध विगतमा पनी भएका होलान्, भविश्यमा अरु पनि घट्न सक्छन् । तर, यसरी अपराधको सजाय भोगिरहेको बेला छक्कै, वाक्कै र ठुक्कै पार्ने फैसला कतै सुन्न पाइएन ! दालमा कालो पदार्थ छ कि दाल नै मासको हो- समयले बताउला ।
यस फैसला सम्बन्धमा गुगलले समेत उत्तर दिन नसक्ने प्रश्न के हो भने- रंजन मालदार भएर हो कि ? पहुँचदार भएकाले हो कि ? श्रीमान् हरुको चित्त ठुलो भएर हो कि ? श्रीमतीको पित्त ठुलो भएर हो ?
श्रीमान् ! आज गरेको निर्णय पछिसम्म लाई नजिर बस्छ भनि बक्सिन्थ्यो ! यो कस्तो नजिर बसाउन खोजेको हो ? यो प्रश्नको फैसला गरि पाउँ श्रीमान् !!